Liverpool Oo Guul Daro Dhabarka U Saarisay Kooxda West Bromwich Albion, Mohamed Salah Oo Shabaqa Soo Taabtay
HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo guul daro dhabarka u saarisay kooxda West Bromwich Albion, Mohamed Salah oo Shabaqa soo taabtay
kooxda Liverpool oo booqasho ugu tagtay kooxda West Bromwich Albion ayaa guul ka gaartay kulan ka tirsan Horyaalka Premier League.
Goolal ay kala dhaliyeen Salah iyo Alisson Becker ayaa ka caawiyay Liverpool in ay baaqi ku ahaato kaalinta shanaad iyadoo leh 63 dhibcood waxayna dhibic ka danbeysaa Chelsea oo leh 64 dhibcood.
Daqiiqadii 15aad ee ciyaarta Robson-Kanu ayaa hogaanka u dhiibay West Brom kaasi oo ka naxsaday Liverpool lakin goolkaasi ayaanan waarin waxana bar-bareeyay Salah isla qeybta hore daqiiqadii 33aad ee ciyaarta iyadoo labada koox ay ku kala nasteen 1-1.
Reds ayaa dedaal badan samaysay qaybtii dambe ee ciyaarta, iyadoo laba fursadood oo goolal loo qaatayna ay ka lumiyeen Alexander-Arnold iyo Gini Wijnaldum, laakiin waxa shimbirkooda noqday goolhaye Alisson Becker oo daqiiqaddii ugu dambaysay soo galay koorne ay kooxdiisu heshay.
Goolhayaha reer Brazil ayaa madax awood badan ku qabtay kubadda, waxaana uu ku hubsaday shabaqa West Brom, taas oo markii lasoo dhigay badhtamaha garoonka ee la isku laadayna ay sikino kooban kaddib dhamaatay ciyaartu.
Liverpool ayaa yeelatay 63 dhibcood waxaanay hal dhibic ka dambaysaa Chelsea oo 64 dhibcood leh balse Salaasada la ciyaari doonta Leicester City oo iyaduna ku jirta kaalinta saddexaad, haysatana 66 dhibcood, halka Liverpool ay Burnley la ciyaari doonto isla maalintaas.
Natiijada Chelsea iyo Leicester City ayaa faa’iido weyn u noqon doonta Liverpool haddii ay iyadu soo badiso, waxaana midkooda laga badiyaba ay kala bixi kartaa booska, halka barbarro ay wada galaanna ay halis ku jirto Chelsea oo ay Liverpool ka sarrayn doonto hal dhibic.
Waxa kale oo jira kulamo adag oo u hadhsan labada kooxood ee Liverpool ka horreeya ee Chelsea iyo Leicester City, waxaanay Axadda toddobaadka dambe la kala ciyaari doonaan Aston Villa iyo Tottenham, halka Liverpool ay la ciyaari doonto Crystal Palace.